Shaver Uchungechunge lweAlfa licompact shaver eline-compact, elinokubamba imisebenzi esisiseko yokunyameka kobuso. Kwakhona imveliso enikezela ngezisombululo ezicocekileyo zendlela yokuyila edityaniswa ne-aesthetics entle. Ukulula, ubuncinci kunye nokusebenza ngokudibeneyo nokusebenzisana okulula komsebenzisi kwakha iziseko zeprojekthi. Amava omsebenzisi owonwabisayo sisitshixo. Iingcebiso zingasuswa ngokulula kwishafti kwaye zibekwe kwicandelo lokugcina. I-dock yenzelwe ukubiza ishaja kunye nokucoca iingcebiso ezixhaswe ngokhanyiso lwe-UV ngaphakathi kwecandelo lokugcina.
Isixhobo Esibonakalayo Esisebenzayo
Isixhobo Esibonakalayo Esisebenzayo Le projekthi ibonelela ngamava aphathekayo okuhlala kwesi sihlwele sangaphandle, esahlulahlulwe sabihlulwa kabini: omzimba ophambili kunye neemodyuli ezinokutshintshwa.Umzimba ophambili ubandakanya ukutshaja, ukuxubha kwamazinyo kunye nokucheba.Izixhobo zibandakanya ukuxubha kunye nokucheba intloko.Intlandlolo. Impembelelo yemveliso ivela kubantu abathanda ukuhamba kwaye imithwalo yabo igcwele okanye ilahlekile, ngoko ke iphakheji ephathekayo, eguquguqukayo yaba le mveliso ikhoyo. Ngoku baninzi abantu abathanda ukuhamba, ke iimveliso eziphathwayo ziba lukhetho.Omveliso uyangqinelana nemfuno yentengiso.
Ukuqiniswa Kweenwele Ibhokisi Yesidlo Sasemini Shaver Isixhobo Esibonakalayo Esisebenzayo Ikati Ibhedi Isixhobo Esikhuliswa Ngokukhawuleza Ngemilebe Yendalo